Vavaka ho an'ny Sakramenta Masina. ? ny fiankohofana, Mangataka fahagagana sy dera
Vavaka ho an'ny tso-drano Litorjika avokoa ny finoana ao amin'ny finoana katolika matetika. Ny mpino rehetra dia tokony hahafantatra ireo vavaka ireo ho afaka hanao izany isaky ny mila izany isika.
Tsarovy fa ny vavaka dia loharano azontsika ampiasaina isaky ny mahatsapa ny ilana azy isika, tsy tokony hanao azy ireo tsy misy finoana fa kosa amin'ny fihetseham-po marina ao am-pontsika fa ny zavatra ataontsika dia zavatra ara-panahy ary tokony ho raisina tsara .
Atao io vavaka io, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia ny ivavahana an'i Jesosy Kristy Tompontsika, amin'ny fanekena ny sorona nataony ho an'ny zanak'olombelona teo amin'ny hazo fijaliana.
1 Vavaka amin ny Masina Masina indrindra ny fomba fivavaka?
2 1) Vavaka fangatahana ny masina indrindra
3 2) Vavaka amin'ny Masina indrindra mba hangataka fahagagana
4 3) Vavaka mba hidera ny sakramenta masina indrindra
5 4) Vavaka amin'ny Sakramenta Masina alohan'ny hatory
5.1 Iza no masina indrindra?
5.2 Afaka mandrehitra labozia ve aho rehefa mivavaka amin'ny Masina indrindra?
Vavaka amin ny Masina Masina indrindra ny fomba fivavaka?
1) Vavaka fangatahana ny masina indrindra
«Ray mandrakizay, misaotra anao aho satria Ianao infinito Ny fitiavana no namonjy ahy, na dia tsy sitrako aza. Misaotra, Raiko, noho ny faharetana lehibe izay niandry ahy. Misaotra, Andriamanitro ô, noho ny famindram-ponao tsy azo refesina izay namindra fo tamiko. Ny valiny azoko omena anao ho valin'ny nataonao rehetra dia ny fahalemeko, ny fanaintainako ary ny fahoriako.
Izaho dia eo alohanao, ry Fanahy Fitiavana, fa afo tsy hay hadinoina aho ary te-hijanona eo anatrehan'ny hatsaranao mahafinaritra aho, te-hanamboatra ny hadisoako aho, hanavao ny tenako amin'ny fankasitrahako ary hanome anao ny fiderana sy fiderana anao.
Ry Jesosy malala, eo alohanao aho ary te-hanala ny fo tsy hita isa ao amin'ny fonao masina, misaotra anao sy ny olona rehetra, ho an'ny Fiangonana Masina, ny pretra sy ny fivavahanao. Avelao, ry Jesoa, fa ireny ora ireny dia tena fotoana ifankinan'ny fitiavana, ora amam-pitiavana izay omena ahy hahazoana ireo fahasoavana rehetra natolotry ny fonao masina ahy.
Maria Virjiny, Renin'Andriamanitra sy Neny, Miaraka aminao aho ary miangavy anao hizara amin'ny fahatsapana ny Fonao tsy manam-petra.
Andriamanitra ô! Mino, mivavaka aho, manantena ary tiako ianao. Miala tsiny an'ireo tsy mino aho, tsy mivavaka, aza manantena fa tsy tia anao.
Trinite Masina Masina indrindra, Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, mankafy fatratra anao aho ary manolotra anao ny tena vatana, ra, fanahy ary maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay hita ao amin'ny Tabernakely rehetra eto an-tany, ho valin'ny fahatezerana rehetra, fahafoizan-tena sy tsy firaharahana izay mahatafintohina ny tenany. Ary amin'ny fahamendrehana tsy manam-petra an'ny fony masina indrindra sy ny fon'i Maria tsy misy kilema, mangataka aminao aho mba hiova fo ho an'ny mpanota mahantra. "
Vavaka fanolorana ny masina indrindra mampiseho ny fanekena tanteraka avy ao am-poIzany no antony maha-zava-dehibe io vavaka manokana io satria ao aminy no tsy hangatahantsika zavatra manokana fa hatolotra ilay fontsika fotsiny amin'ilay mendrika azy miaraka am-po manenina sy manala baraka araka izay ampianarina amin'ny tenin'Andriamanitra.
Ny fanolorana, izay atao avy amin'ny fo sy amin-kitsimpo dia fitaovam-piadiana mahery vaika eo amin'ny sehatry ny ara-panahy.
2) Vavaka amin'ny Masina indrindra mba hangataka fahagagana
«Ray masina any an-danitra indrindra
Misaotra anao aloha izahay voalohany
Ho an'ny sorona fitiavana nataonao, tamin'ny fahafatesanao ny fahotantsika
Izany no antony ahalalako anao, toy ny Tompoko, sady Mpamonjiko tokana
Androany aho te hametraka ny Raiko malalako eo anoloanao, ny fiainako
Ianao no mahalala izay hanjo ahy, ary ny manetry tena eo anoloanao
Dada teninao milaza fa tamin'ny ratrao no nahasitranana antsika
Ary tiako ny mampanantena izany, mba hositraninao aho
Tompoko mangataka anao aho ho eo an-tanan'ireo manam-pahaizana manokana izay manana ny ahy
Mba hanomezanao azy ny paikady ilaina hanampiana azy ireo aho
Raha ny sitraponao masina indrindra
Ampandao ahy ny tananao manasitrana, ary diovy ny loto rehetra amin'ny fahalotoana rehetra
Esory amin'ny sela rehetra ny sela rehetra
Ary ampodio ny fanasitranako
Mangataka aminao aho, Ray ô
Enga anie ianao hanongilan-tsofina hihaino ny vavako
Ary ny tavanao masina dia hahita fahasoavana eo anoloako
Matoky aho fa efa henonao ny vavaka nataoko
Ary mazava ho azy fa manasitrana ato amiko ianao
Hatao anie ny sitraponao ry Ray malala
Mila ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ve? Rehefa izany dia tsy maintsy mivavaka ny Masina Indrindra ianao hangataka fahagagana.
Ity vavaka ity dia hanampy anao hahavita fahagagana. Na mora na sarotra, ny vavaka dia mety hiasa fotsiny.
Mivavaha amim-pinoana lehibe ao am-ponao ary minoa hatrany ireo herin'Andriamanitsika.
3) Vavaka mba hidera ny sakramenta masina indrindra
«Mahazo ny fahazavana, ny fiadanana ary ny famindram-po aho anio
Ilay Tompon'ny lanitra rehetra voatahy;
Izaho mandray an'i Jesosy vatana sy fanahy
Ho feno fankasitrahana, faniriana, fahasambarana, ny fiainako,
Fiantrana sy fitoniana alohan'ny fitsidihanao;
Mitoetra lalandava ao anatiko aho
Manome ny finoana masina mamela ahy aho
Mijanòna amin'ny fotoanan'ny krizy;
Tiako ny fifangaroan'ny rantsan-danitra
Talohan'ny dian'ity fiainana ity
Izy io dia nofehezin'ny masina indrindra.
Alaiko ao am-panahiko ity sakramenta ity
Ary raisiko am-pitiavana sy fiantrana ary fitiavana izany.
Ho amintsika rehetra anie ny fiadanan'ny fanahy
Ary ny halavan'ny haizina dia miala rehefa
Miorina ny finoako.
Manàna finoana izany vavaka izany mba hiderana ny sakramenta masina indrindra amin'ny alitara.
Ny fiderana dia fisandratana izay atao avy ao am-po sy amin'ny fahafantarana fa tsy misy olona tahaka izany olona izany. Amin'izany dia midera ny Tompo isika, mpanjakan'ny mpanjaka izay naneho fitiavana ho an'ny tenany. Niaritra ny fanaintainana sy ny fanalam-baraka izy ka afaka mahazo ny tena fahafahana ao anatiny isika ankehitriny.
Ny fiderana dia ampahany manan-danja amin'ny vavaka isan'andro izay tsy azontsika tsinontsinoavina satria tsy maintsy manaiky ny herin'ny Tompo mandrakariva isika.
4) Vavaka amin'ny Sakramenta Masina alohan'ny hatory
«Ry Jesosy Masina ô! fa mandritra ny alina dia manirery ianao amin'ny trano lay maro eto amin'izao tontolo izao, nefa tsy misy ny zavaboarinao mandeha mitsidika sy mankafy anao.
Atolotro anao ny foko mahantra, manantena aho fa ny fitempesany rehetra dia mitovy amin'ny fitiavana sy fiankohofana. Ianao, Tompoko, dia mifoha mandrakariva eo ambanin'ny karazana Sakramenta, ny fitiavanao feno famindram-po dia tsy matory na reraka amin'ny fiambenana ny mpanota.
Ry Jesosy be fitiavana, ry Jesosy irery manadino! Ataovy toy ny jiro mirehitra ny foko; Amin'ny fitiavana manjary ary hodorana hatrany amin'ny fitiavanao. Jereo oh! Andriamanitra sentinel!
Tandremo izao tontolo izao fadiranovana, ho an'ny pretra, ho an'ny fanahy voatokana, very ny maty, ho an'ny marary marary, ny alina tsy manam-petra no mila herinao sy fampiononana anao, ho faty sy ho an'io mpanompo manetry tena io izay manompo anao kokoa amin'ny fitsaharana fa tsy miala avy Aminao, avy amin'ny tabernakelinao… izay misy anao mitoetra irery sy mangina amin'ny alina.
Enga anie ny Fo Masin'i Jesosy hotahina hatrany, deraina, hotompoina, hotiavina sy hajaina ao amin'ny Tabernakely rehetra eran'izao tontolo izao. Amena. "
Ity vavaka ity amin'ny Sakramenta Masina sy Sakramenta Masina alohan'ny hatory dia iray amin'ireo mahery indrindra amin'ny rehetra.
Alohan'ny hatory dia zava-dehibe ny manao vavaka vitsivitsy na mivavaha amin'ny Sakramenta Masina mba hanampy antsika hialana amin'ny fitoniana tanteraka. Ny fananganana vavaka ho an'ny sakramenta masina indrindra alohan'ny hatory dia zavatra tsy maintsy ataontsika isan'andro ary na dia ny fandefasana fanao amin'ny ankizy aza dia misy lanjany lehibe tokoa.
Ao amin'ny fiangonana katolika dia iray amin'ny vavaka lehibe indrindra izy io satria manatanjaka ny finoan'ny kristianisma ary manatanjaka ny fanahy.
Vavaky ny fankatoavana, fiderana y Jesosy manompo sy ny sorona nataony ho an'ny zanak'olombelona. Fantatsika fa ny vavaka dia mitondra tombony hatrany amin'ny fiainantsika satria amin'ny alàlan'izany dia mampatanjaka sy mameno anao amin'ny fiadananao izahay, ka izany no ilaina amin'ny fananana fifandraisana amin'ny Tompo.
Iza no masina indrindra?
Ny sakramenta masina indrindra dia fihetsika atao amin'ny finoana katolika izay ahafahantsika manaiky sy manaiky ny sorona nataon'i Jesosy Kristy Tompo. Io fihetsika io dia mazàna dia atao amin'ny alahady fahatelo isaky ny volana izay isehoana fa ahafahan'ny mpino manaitra ny fivavahany.
Mariky ny vatan'i Kristy izay notapahina noho ny fahotantsika noho ny fitiavan'olombelona ny mpampiantrano voatokana ary ilaina ny hananan'ny mpino rehetra izany fahalalana izany mba hilefitra amin'ny fitsaohana eo anatrehan'ny Tompo.
Afaka mandrehitra labozia ve aho rehefa mivavaka amin'ny Masina indrindra?
Ny valiny dia eny, raha azo atao mirehitra ny labozia rehefa mivavaka. Na izany aza, tsy voatery izany satria ny vavaka dia azo atao amin'ny fotoana sy toerana rehetra ary tsy afaka mandrehitra labozia foana isika hivavaka. Matetika ny mpino maro dia manao alitara manokana ho an'ny olo-masiny izay misy labozia izay hazavana amin'ny fotoana voafetra ho fanolorana fanompoam-pivavahana.
Amin'izay tranga izay ny vavaka ary amin'ny asa ara-panahy rehetra dia lehibe ny finoana izay anaovana azy satria misy ny mandaitra azy.
Ny tenin'ny Tompo dia mampianatra antsika fa tsy afaka ny hampiakatra vavaka amin'ny saina feno fisalasalana na mieritreritra isika fa sarotra be ny zavatra angatahinay, satria avy eo dia nanjary fandaniam-potoana ny vavaka izay tsy hahitantsika na inona na inona.
Manantena aho fa nankafizinao ny vavaka tamin'ny Sakramenta Sambatra. Miaraka amin'Andriamanitra
Poderosa vavaka fitahiana